मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | सवारी दुर्घटना कम गर्न आ-आफ्नो ठाउँबाट लागौं !
सवारी दुर्घटना कम गर्न आ-आफ्नो ठाउँबाट लागौं !
प्रवेश बिष्ट –
यात्रीहरु लिएर हिडेको सवारी साधन अकस्मात् क्षती भई जनधनको हानि – नोक्सानि हुनुलाई सवारी दुर्घटना भनिन्छ । सामान्यतयमा भन्दा कल्पना भन्दा परको अथवा नसोचेको घटना नै दुर्घटना हो । हिजोआज हरेक दिन जसो सवारी दुर्घटनाका समाचारहरु आउने गर्छन् । नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो । नेपालको सन्दर्भमा सडक यातायात विकल्पहीन विकल्प हो । हाम्रो देश जस्तो जलमार्गको सम्भावना नभएको , रेल मार्गको विस्तार भई नसकेको र हवाई मार्ग अधिकांश नेपालीको पहुँच बाहिर रहेकाले सडक यातायात एकमात्र भरपर्दो यात्राको माध्यम हो ।
सवारी दुर्घटना कसरी र किन हुन्छ भन्ने कुरालाई गम्भिरताका साथ नलिदा सडक यातायात असुरक्षित बन्दै गईरहेको छ । वर्तमान अबस्थालाई हेर्ने हो भने दुर्घटना र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा सवारी साधनको अत्याधिक चाप बढेको छ । दुर्घटनामा निर्दोष ब्यक्तिहरुले ज्यान गुमाई रहनु परेको छ । कति अनाथ , बेसाहरा भएका छन् । साँघुरा सडक , सडक अतिक्रमण, जिर्ण सडक, सवारी साधनको तिव्र गति, चेतनाको अभाव, सडक विस्तारमा सुस्तता आदि समस्याहरुको समयमा नै समाधान नहुँदा आज दिनानुदिन सवारी दुर्घटनाका घटनाहरु बढिरहेका छन् । दुर्घटनामा परी कतिको अकालमा ज्यान गएको छ । कति अपाङ्ग भएर बाच्न बाध्य छन् । धनको क्षती उत्तिकै छ । दुर्घटनाले व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्रलाई नै ठुलो क्षति पुर्याईरहेको छ ।
नेपालमा यातायातका साधनहरुको आयातमा चरम अनियमितता र असन्तुलिन हुनु नै दुर्घटनाको मुख्य कारण हो । वर्तमान समयमा सडक अतिक्रमण बढ्दै गइरहको छ । सडकमै हाटबजार लगाउने, पसलहरु थाप्ने सडक अबरोध हुने गरी निर्माण सामाग्री थुपार्ने, पशु पंक्षी खुल्ला छाड्ने, सडकको वरीपरी घाँस विरुवा लगाउने, जथाभावि पार्किङ गर्ने जस्ता कार्यले दुर्घटना बढाएको छ । नेपालका अधिकांश सडकहरु भत्किएका, खाल्डा खुल्डि परेका, खोला तथा खहरेमा बनेका पुलहरु साँघुरा, बाटाहरुमा पानी जम्मे खाल्डा छन् । यस्ता समस्या हरुले पनि सडक दुर्घटना बढाई रहेको छ । तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेहरुका लागि सवारी साधनको जाँच तथा गति नाप्ने ( स्पिड कन्ट्रोलर ) उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले गर्दा दुर्घटनालाई केही हदसम्म बचाँउछ । सवारी चलाउँदा कहिल्यै पनि मापसे सेवन नगरौं । बिग्रिएको सवारी साधन चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, हेलचेक्र्याइ गर्ने, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्ने जस्ता सामान्य कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।
यात्रुले कहिल्यै पनि सवारी साधनमा झुन्डिएर, कोचिएर, छतमा चढेर यात्रा गर्नु हुँदैन । यात्रुले आफूलाई पायक पर्ने आफ्नो घर छेउछाउमा भनेकै समयमा सवारी रोक्न चालकलाई दबाब दिनु हुँदैन । यात्रुले जहिल्यै पनि बाटो क्रस गर्दा जेब्रा क्रसिङबाट गर्नुपर्छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला आम नागरिकमा जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । दुर्घटनाका कारण के-के हुन्, न्यूनीकरणका उपायहरू के-के हुन्, कसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव ट्राफिक प्रहरीका साथसाथै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुले विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्छ । यसले पनि दुर्घटना हुनबाट जोगाउन मद्दत गर्छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यतिले मात्र सम्भव छैन् ।
यसका निम्ति चालक, यात्रु र ट्राफिक प्रहरीले ध्यान पुर्याए पनि दुर्घटनाको मात्रा कम हुन सक्छ । तत्काल बाटो चौडा, राम्रो र सुरक्षीत गर्न नसकिएला तर मदिरा सेवन, यात्रुको कोचाकोच, जथाभावी बाटो काट्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई घटाउन भने नसकिने होइन । दुर्घटना एक व्यक्तिको कमजोरीले मात्र हुन्छ भन्ने होइन, दुर्घटना हुनुमा सबै पक्षको आ-आफ्ना कमि कमजोरीहरु छन् । त्यसैले जति सक्छौं आफ्नो ठाउँबाट यसको न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयास गरौ । ताकि तपाईंको त्यो प्रयासले हजारौं निर्दोष व्यक्तिहरुको ज्यान बचोस्।